Isahluko se-3005 seNdodana emangalisayo kwi-Law Novel Free Online | XperimentalHamid
Isahluko se-3005 seNdodana emangalisayo kwi-Law Novel Free Online
Ngamana 10, 2021 Ngamana 9, 2021 by Qasim Khan
funda Isahluko 3005 yenoveli Unyana omangalisayo eMthethweni by INkosi igqabi simahla kwi-Intanethi.
Emva kokuthetha, uMarven waphinda wathi: “Ekuqaleni, aba bantu bathathu kungenzeka ukuba khange bayicinge loo nto, kodwa njengokuba umphathi kunye nomntwana wesibini belahleka omnye emva komnye, ngokuqinisekileyo kuyakwenza ukuba ngamnye kubo abe nethuba lokuba nendlela yakhe.
Ilifa lokukhohlisa kwesi sikhundla, oku akukacingi abazukulwana bakaChengfeng.
Ezo zizukulwana zincinci kufuneka zijonge phambili ekubeni nako ukulawula usapho lodwa. ”
"U-Chengfeng akanandlela yokugqibela kwaye akasokuze ayishiye i-China, kuba xa sele emkile, ngekhe abuye kobu bomi."
Kwintsapho yasebukhosini yamandulo, amalungu amaninzi osapho lwasebukhosini athunyelwa elubhacweni ngokusisigxina.
Isizathu kukuba abo basemagunyeni babengafuni ukuba loo mntu abuye aze asongele ulawulo lwabo.
Nakumaxesha anamhlanje, kuye kwakho iinzame zokuhlutha itrone kumazwe angaphandle.
Ngokubanzi, umongameli waya phesheya waya kutyelela, kwaye uqhushululu lwasekhaya lwasungulwa ngomqolo.
Kwangelo xesha, kufuneka bakulumkele ukufa kwaye bangaze bavumele owayesakuba ngumongameli ukuba abuyele elizweni.
Ngenxa yoko, owayesakuba ngumongameli unokuhlala elubhacweni kuphela.
Ke ngoko, ngemini uChengfeng eshiya iTshayina, kufuneka ibe sisiqalo sokuphela kwakhe!
UZhiyu khange athethe wajonga uMarven okwexeshana, emva koko wabuza: “Uyafuna ukutsalela utatomkhulu ukuba amnyanzele ukuba andicele?”
"Ewe." UMarven wanqwala wathi ngoncumo: “Utatomkhulu wakho kufuneka angazithembi ngoku.
Akukho khuselo lwengcali yomeleleyo kuye, nokuba kuseSuzhou, eOrgeyon, okanye kwabanye oogxa basekhaya.
Kunzima kakhulu esixekweni ukuqinisekisa ukhuseleko, kwaye ebambe amandla osapho kwaye emathidala ukuyeka, ngenxa yoko akalindeli ukuya phesheya. Olona khetho lulodwa kukwenza uxolo. ”
Emva kokunqumama, uMarven washukumisa loo fowuni ibicinyiwe esandleni sakhe, wancuma wathi: “Kodwa sendibeke la magama akhohlakeleyo ngoku.
Le fowuni icinyiwe. Wayefuna ukwenza uxolo, kodwa akazange andifumane kwaphela.
Uya kujonga nayiphi na indlela yokuqhagamshelana nam, kwaye ekuphela kwendlela kukukufumana. ”
Emva kokuthetha, uMarven waphinda wathi: “Ukuba uyakucela ukuba wenze uxolo, umthembise ngokulula, kodwa akufuneki uthethe kakubi.
Umxelele ukuba uza kuzama konke okusemandleni akho, kodwa awuqinisekanga ukuba ungandicenga okanye hayi. ”
UZhiyu wathandabuza okomzuzwana, wambuza: “Unexhala lokuba emva kokusebenzisana kwezothutho lolwandle, uza kuza azokuthintela?”
"Ewe." UMarven uthe ngokunyanisekileyo: “Ixabiso lentengiso yeshishini losapho lokuhambisa izinto elwandle phantsi kweemeko eziqhelekileyo yi-RMB 300 billion ukuya kwi-400 yezigidigidi.
Nokuba ijongene nobunzima ngoku, iiasethi ezizezona zizonke zi-RMB 200 billion.
Utatomkhulu wakho unike iqhekeza elikhulu kangaka leqebengwana esandleni sakho, unethemba lokuba uza kumgcinela lona, ​​endaweni yokuba uthabathe imela nefolokhwe uyitye. ”
“Nje ukuba uthathe lonke iqela lokuthumela elwandle ukuze usebenze kunye nam, emehlweni akhe, kuyalingana nokuthengisa ikeyiki.
Oku kuyakuchukumisa ngokupheleleyo izikali zakhe ezimbi.
Uya kwenza konke okusemandleni ukunqanda ngelo xesha, nokuba ungathandabuzi. Chasa kwakhona. ”
Emveni kokuba ethethile, uMarven wajika wathi ngoncumo: “Kodwa ungaqiniseka ukuba emva kokuba uvumile ukuba uzamlamlela, awunakukhathazeka ukuba uza kujika ubuso bakhe.”
“Kuba bendingenaxesha lokumkhathalela okwethutyana, nditsale umnxeba ndimoyikise ngelithi ndifuna ukumfumana, kodwa sisibhanxa nje esixokayo.
“Ke, ukhuselekile ngexesha elifutshane, ubuncinci andizukujongana naye.”
"Ngokuqinisekileyo uya kuluqinisekisa olu hlobo lokhuseleko kuwe, evakalelwa kukuba luluncedo lwakho ngokupheleleyo."
"Ngelo xesha, uyakukubona njengekhubalo lakhe, angathini ukukuthintela ukuba ungathathi iqela lezothutho lolwandle losapho kunye nokusebenzisana nam?"
Isahluko se-3004 seNdodana emangalisayo kwi-Law Novel Free Online
Unyana osisigidigidi kwiNoveli yoMthetho Isahluko 2760 - 2761
Iingcinga ezi-3 kwi "Isahluko 3005 soNyana oMangalisayo eMthethweni kwiNoveli yasimahla kwi-Intanethi"
Meyi 10, 2021 kwi-5: 48 PM
Meyi 10, 2021 kwi-5: 03 AM
Me encanta el giro que esta dando la novela en resolutionver as Marven y en el manejo de sus inversiones y sobre todo en el matiz de género que tiene la novela
Meyi 9, 2021 kwi-7: 44 AM